Welcome to Ministry of Health
Your official portal to public health services, hospitals, health information and health careers in Myanmar.
From 1962 to date 2021, how many of our patients have died, hurt and suffered due to the military dictatorships?
Let’s make these dictatorships to extinct together even it means our career and lives are at risk!
Let’s rebuild our health system for healthier lives and better access to quality health care.
Survey on Covid-19 Morbidity and Mortality
Data and Statistics on Covid-19 Morbidity and Mortality
View the latest releases​
Support the People of Myanmar’s COVID-19 Relief Fund
COVID-19 Booklet Version 1.0
Coronavirus (COVID-19) isavery serious sickness that spreads from person to person. This booklet offers important tips for Myanmar people and communities about coronavirus. We all need to work together to keep our communities safe and help stop the spread of coronavirus. Click here to get the booklet.
Update on COVID-19 Virus ( 17-6-2022)
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (17-6-2022) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးများကို တစ်စုတည်းဖတ်ရှုရန်-https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/ တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့အွန်လိုင်းဆေးခန်း (8 AM –6PM Daily)https://facebook.com/telehealthmm ဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/...
Update on COVID-19 ( 30-5-2022 )
🦠 COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (30-5-2022) 🦠 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၃.၇ သန်းကျော် ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း COVID-19...
ဘဝအမောတွေ ခဏတာ ပြေစေဖို့ တယ်လီကျန်းမာ အလွွဲများ
အလွဲလေးတွေ ဟာသလေးတွေဆိုတာ လူတိုင်းကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ဆရာဝန်/လူနာ အလွဲဟာသလေးတွေ ရှိတတ်သလို အခုလို အွန်လိုင်းကနေ အခမဲ့ကုသပေးချိန်မှာလည်း အလွဲလေးတွေကနေ ပြေးလို့မလွတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူး… များသောအားဖြင့် စာစီစာရိုက်မှားတာ၊ အကောင့်တွေမှားတာမျိုးဆိုပေမယ့် တချို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အလွဲလေးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါက...
Mindfulness “အသိသတိ ရှိရှိနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ခြင်း”
“အသိသတိ ရှိရှိနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ခြင်း” လူမှန်ရင် ဒုက္ခနဲ့မကင်းတာမှန်တာမို့ ဘဝမှာ ခံစားကြုံတွေ့ရသမျှကို အဲဒီခဏမှာ အသိသတိ အပြည့်ကပ်ပြီး တည့်တည့် ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အတိတ်ဟာ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာဖြစ်ပြီး အနာဂတ်ဟာ မရောက်လာသေးတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ အမှန်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခုပစ္စုပ္ပန်ကို အလေးထား...
ဒီတစ်ခေါက်မျှဝေလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Menopause “သွေးဆုံးကိုင်ခြင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများလည်း မိမိရဲ့မိခင်၊ ချစ်သူ၊ ဇနီး၊ မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးများကို စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်ပါတယ်နော်။ အမျိုးသမီးတွေ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှစပြီး လစဉ်ကြုံတွေ့နေကျ ဓမ္မတာလာခြင်း (ရာသီလာခြင်း) ရပ်တန့်သွားချိန်ကို Menopause...
After the current health system being collapsed due to the brutal military coup, there are3main concepts to adopt...
Traditionally, the healthcare allocation in Myanmar is based on the population size. For example, the healthcare budget is higher for...
The Concept of Health asaBridge for Peace
Health asaBridge for Peace (HBP) isamultidimensional policy and planning framework which supports health workers in delivering...